बर्सेनि कहाँ जान्छ ९० अर्ब ? | karnalikhabar.com
बर्सेनि कहाँ जान्छ ९० अर्ब ? – karnalikhabar.com
बर्सेनि कहाँ जान्छ ९० अर्ब ?
प्रकाशित मिति :2017-01-11 08:14:13 नेपालमा बर्सेनी करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ। उच्चपदस्थले अनधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले बर्सेनि ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कालोधन जम्मा हुने अनुमान गरेको छ । भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन र हुण्डीबाट सबैभन्दा बढी कालोधन आर्जन हुने अनुमान सरकारको अध्ययनले देखाएको हो।-नागरिक दैनिक